Dhurwaa Dhuumasho Hoosiyo Dhuruq Dhaaruq Ma Daayo Doqona Aan Dhug Lahayna i Dhayaayda ma Daayo – Rasaasa News
Jul 25, 2009 Jwxo-shiil, Jwxo-shiilo
Ogaysiis iyo Digniin ku socota dadweynaha Somalida Ogadeeniya guud ahaan, gaar ahaana kuwa ku nool dalka Ingriiska, Jwxo-shiilo yeyna jeebkiina jajabka ku jira jidiinka marinin ee u jaawiya suulka jiita J……o.
Wararka naga soo gaadhacay cariga Ingriiska ayaa waxay sheegayaan in kooxda Jwxo-shiilo [Qabiil ku Jabhad], ee degan dalka Ingriiska, oo ah dalka uu deganaanshaha ka haysto Dambiil Jawxo-shiil, oo mudo ka gaabsanayey in ay sameeyaan wax dhaqdhaqaaq ah ayaa waxaa la sheegayaa in ay bilaabeen dhaqdhaqaaq.
Tan iyo intii ka dambaysay dilkii Dr. Dolal, ayaa waxaa saaxada laga waayey oo shanqadhooda la waayey Jwxo-shiil iyo Jwxo-shiilo, waxaana inta badan la maqli jiray kooxda kale ee la yidhaahdo Jwxo-shiilada oo inta badan afka ka hadli jiray iyaga oo qoraalo samaynaya.
Sida ay wararaku sheegayaan Jwxo-shiilo, waxay ka cabsanayeen in lagu qaado dambiga ay ka galeen dadweynaha Somalida iyo halganka, eegana waxay moodayaan in la iloobay dambigooda aan abid la halmaami karin.
Hadaba, sida wararka ka imanaya Ingriiska ay sheegayaan, waxaa ay Jwxo-shiilo [Qabiil ku Jabhada], bilaabeen dhaqdhaqaaq naf la caari ah oo ay isku dayayaan in ay dhaqaalo ku uruursadaan, ka dib kolkii aan muddo wax dhaqaalo ah la helin, oo ay joojiyeen dadweynihii bixin jiray dhaqaalaha ka iman jiray qaaraanka.
Dhaqdhaqaaqyada ay hada Ingriiska ka bilaabeen ayaa la mid ah kuwa ay hore uga bilaabeen Maraykanaka oo ay ku guul daraysteen. Waxayana u halgalayaan sidan; Waxaa la is raacinayaa rag duqay ah oo inta badan ay xigto yihiin Jwxo-shiil iyo haween u dhaxay Jwxo-shiilo, waxaa loo dirayaa guryaha Telefoono waxaana loo sheegi in ay dagaalo dhaceen oo lacag loo ururinayo Jwxo [waa sida ay dadka u sheegayaan, laakiin waa lacag lagu masaariifayo ciidan beeleedka uu wato Jwxo-shiil] lagana qaadayo qoys walba oo Ogadeen ah, gurigana loogu imanayo marka noo sheeg inta aad bixin kartid. Guryaha ay garanayaan waxaa ay u kaxaystaan hal baabuur kolkaas ayey Albaabka ku garaacayaan, waxayna si xun u baryayaan iyaga oo haweenka ku leh waxaanu nahay ciroolayaal, wax ku waydiistay, hadii aad naga bixiso guriga anaga oo fara madhan inkaartanada ayaa caruurta wax kaa yeeli.
Waxaanu idiin soo gudbin doono magacyada dadka uruurinaya lacagaha, ka dibna waxaanu u gudbin doono maamulka degamada ay ka tirasn yihiin iyo waliba Booliska la shaqeeya maamulka Degmada, si wax looga qabto dhibaatooyinka ay ku hayaan dadweynaha ee ay kaga uruursanayaan lacagaha sharci darada ah.
Hadaba, su,aashu waxaa weeye dadkani lacagaha ay uruurinayaan xagee ayey geeyaan, maxaana faa,iido ah oo ugu jirta dadweynaha Somalida Ogadeeniya? Waxaa aynu ognhay in dhulka Somalida Ogadeeniya ay ka dagaalami jirtay Jwxo, waxaana dhacay in Jwxo ay ka leexatay dariiqii halganka, oo iyada laftigeedu ay u kala baxday laba garab oo midba midka kale col la yahay. Waxaana Gudaha Ogadeeniya lagu dilay N/hurayaal qaali ah, oo ay dileen xubno dambiilayaal ah oo ka tirsan Jwxo oo uu ugu horeeyo Jwxo-shiil [Cumar Cisman], waxaa is aamini waayey oo kala tagay wiilashii ciidanka Jwxo ahaa.
Jwxo-shiil waxaa uu wali duurka kula jeeraa ciidan beeleed isaga difaacaya inta laga gaadhayo xiliga doorashooyinka Itobiya oo ah May 2010, inta ka horaysana waa in uu sii wdaa Jwxo-shiil dhibaataynata dadweynaha Somalida Ogadeeniya, oo todobaad walba uu ku laayo dad qiimo ku leh bulshada degaanadooda. Marka ay timaado doorashaduna lagu qanciyo Jaaliyadaha dibada waxaanu dooranay nabad si dadku u helo nolol.
Waxaa kale oo uu dibadaha ka wadaa Olole siyaasadeed oo la doonayo in uu Itobiya kula gorgortamo jagooyin, todobaadkii hore ayey ahayd kolkii Ma yeedhaan Maadey Xabashi iyo Ormo isaga oo daba fadhiya uu la kulmay wasiirka caafimaadka ee gumaysiga Itobiya kaas oo sugaya Jagada R/wasarenimo ee Itobiya.
Hadaba, Qaaraanka ay ururinayaan Jwxo-shiilo [Qabiil ku jabhad] ma aha mid dalka lagu xoraynayo ee waa mid la doonayo in lagu masaariifo Jwxo-shiil iyo ciidan beeleedka uu wato ee sidaas u ogaada.
Dadweynaha Somalida Ogadeeniyow, hadii ay daacad tahay halganka lagu xoraynayo Ogadeeniya waxaa la arki lahaa iyada oo la buuxinayo [Ogaden Petition to UK prime minister] oo muddo 4 bilood ah ay buuxiyeen 50 ruux oo kaliya. Marka muxuu yahay qaaraanka beenbeenta ah ee dadweynaha la doonayo in lacag lagaga qaato. Isweydiiya walaalayaal oo ruux lacag uruursanaya oo doonaya in uu Ina adeerkii ku nooleeyo ha u arkina marna in uu daacad yahay, kuna bixiya lacagihiina meelo kaga munaasabsan Dambiile Jwxo-shiil.
Hadii uu halganku sax ka yahay kooxada Jwxo-shiil, waxaan filayaa in ayna dhaceen dhacdooyinka maanta haysta halgankeena, Waxaan is arki lahaa Indheer garadka Somalida Ogadeeniya waxaana laga tashan lahaa sidii halganka loo taageeri lahaa, laakiin waxay ka quusteen Jwxo-shiil iyo beeshiisa waana looga hadhay iyaguna ma leh caqli ay ku yidhaahdaan waynu khaldanay. Waxaa uun ay garanayaan “Kobtan Ceelkii Oonyood ka soo qaad”, in ay Jabhadi jirtay umbay garanayaan laakiin ma garanayaan meesha ay arini taagan tahay.
Waxaan mar 2aad iyo mar 3aad u sheegaynaa dadweynaha Somalida Ogadeeniya in ayna bixinin lacag lagu waxyeelaynayo dadweynaha Somalida Ogadeeniya.
Dadka guryaha idiin fadhiisanaya ee leh hadii aydaan lacag nasiin waan idin habaaraynaa, waa khaa,imiin xaqna idinkuma leh ee indhaha biyo kaga shuba, magacyadoodana u soo gudbiya bogga badbaadshe bogga rasaas.com